रिक्सा च'ढ्दै'मा मान्छे सा'नो हुन्छ र ? साम्राज्ञीको जवाफ
नेपाली चलचित्र रिक्सा च'ढ्दै'मा मान्छे सा'नो हुन्छ र ? साम्राज्ञीको जवाफ
रिक्सा च’ढ्दै’मा मान्छे सा’नो हुन्छ र ? साम्राज्ञीको जवाफ
Nepal Online Patrika: सामाजिक सञ्जा’लमा आ’रोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र अभिनेता भुवन केसी पछिल्लो समय मौन थिए । तर, यसै विषयलाई प’क्ष वि’प’क्ष गर्दै कलाकर्मीहरूले आफ्नो विचार राख्दै दुईमा एकको समर्थन गरिरहेका बेला फेरी एक पटक साम्राज्ञी बोलेकी छिन् ।
निर्देशक शोभित बस्नेतले पनि यो विषयमा आफ्नो भनाई राखेपछि उनी बोलेकी हुन् । शोभितले एक अन्र्तवार्तामा नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको बिषयमा भनेका थिए-‘विरगञ्जमा रिक्सा चढेर हिड्ने मान्छे अहिले भूवन केसीकै कारणले गर्दा कार चढेर हिड्ने भएकी छिन् । भूवनकै कारणले ‘ड्रिम्स’बाट स्टार भएको मान्छेले अहिले उनैलाई आ’रोप लगाउन मिल्छ ?’
खाना र छाताको प्रसंग उठाउँदै शोभितले भनेका छन् -‘साम्राज्ञीको मामा रवि बस्नेत निर्माता भएको चलचित्रमा खाना नपाउँदा र छाता ओड्न नपाउँदा गल्ती भूवन केसीको हुन्छ कि रवि बस्नेतको ?’ साम्राज्ञीले यस विषयमा शाभितलाई जवाफ फर्काउँदै भनेकी छिन्- ‘एक जना मानिसले मैले वीरगन्जमा रिक्सा चढेर हिँड्थ्यो भन्नुभएछ ।
म उहाँलाई त व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ । तर, उहाँको छोरा मेरो राम्रो साथी हो । हो, म वीरगन्जमा रहँदा रिक्सा चढ्थेँ । यसपछि, म दिल्लीमा बसेर पढेँ । अहिले काठमाण्डौमा छु । ठुला-ठुला कार चढौँ कि के गरौँ त्यो मेरा कुरा हो । रिक्सा चढ्दैमा मान्छे सानो हुन्छ र ?’